काठमाडौं । बिहानै देह सुख! मानिसको चाहनाको कुनै सीमा छैन। हिजोआज मर्निङवाकमा जानेहरू साथीसहित होटलका कोठामा जाने गरेका छन्। दिउँसो र बेलुका होटलमा छापा मार्ने चलन बाक्लो भएपछि जोडाजोडीले अवैध
एजेन्सी- सबैभन्दा धेरै दूध दिएर विश्व रेकर्ड राखेको भारतको एक भैँसी भारु ५१ लाख (नेपाली ८१ लाख ६० हजार) मा बिक्री भएको छ। हरियाणाका किसान सुखवीर सिंहले पालेको मुर्रा जातको
व्यापारी ह’ ‘त्याको आ’शंकामा बैतडीमा प्रहरीले दुई व्यापारीसहित सातजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहीबार बिहान सुर्नया गाउँपालिका–४ को लेकडाँडा घर भई स्थानीय सन्सेरीमाडौंमा मासु पसल गर्दै आएका ५५ वर्षीय कमलसिंह महरा
तिजको ‘चरी जेलैमा’पछि विष्णु माझीको दशैं–तिहार गीतले पनि बजार ततायो
काठमाडौं । मान्छेको स्वभाव– लुकेको/लुकाइएको कुरालाई धेरै हेर्न खोज्छ । कुनै पनि कुरालाई जति लुकाइन्छ, त्यसप्रति चासो र उत्सुकता त्यति नै बढी हुन्छ । नदेखेको, नभेटेको कुरामा मान्छेले स्वाभाविकै बढी
काठमाडौं : अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले केहिदिन अघि छोरीलाई जन्म दिएकी छन्। जन्मिनुअघि नै आयुष्मान र प्रियंकाले आफ्नो सन्तानको नाम तय गरिसकेका थिए। बाबुआमा र छोरीको पहिलो फोटो सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले
प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गायब भयो… ?
शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिखेर उनले सो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । देउवा अहिले पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको साढे दुई
बलिउडका दिग्गज तथा चर्चित अभिनेता सुनिल सेट्टीले हलिउडकी चर्चित अभिनेत्री मिसाएला कोएलको भाषणको प्रशंसा गरेका छन् । मिसाएला कोएलले आफ्नो सो ‘आई मे डेस्ट्रोय यु’ का लागि हालै एमी पुरस्कार
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडादसैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । असोज २१ गते बिहीबार बिहान ११ः४६ बजे घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले राससलाई जानकारी
श्रीपेच चोर्न खोज्ने खेमबहादुरको बयान : श्रीपेच लगाएपछि राजा बनिन्छ भन्ने लाग्यो
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयबाट श्रीपेच चोर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका घर भइ हाल काठमाडौँबस्ने खेमबहादुर घर्ती रहेका छन् । उनको मा’नसिक
यो जोडीले कार भित्रै…..
कारभित्रै यौ’ ‘न स’म्प’र्क गरिरहेका बेला एक जाेडी आ’पतमा परेका छन्। इंग्ल्यान्डको डर्बिसायरमा एक जोडी प्रेमी–प्रेमिका कारभित्रै यौ’ ‘नक्री’डा’मा व्यस्त रहेका बेला कार प’ल्टिएको हो। ‘द सन’का अनुसार सुनसान स्थानमा